स्वास्थ्य सेवा परिभाषित: सिक्केन्सरी भनेको के हो? | चेकअप - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समाचार मनोरञ्जन समुदाय, कल्याण कम्पनी, चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि बनाम मित्र खेलहरु कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय भारी खेल
मुख्य >> कम्पनी >> सिक्केन्सरी भनेको के हो?
कहिलेकाँही स्वास्थ्यसेवा सर्तहरू पूर्ण फरक भाषा जस्तो देखिन सक्छ। जस्तै शब्दहरूको साथ copyay , घटाउन योग्य , र अधिकतम बाहिरको जेब वरपर फ्याँकिएको, तपाइँलाई के हो भनेर कसरी थाहा पाउनुपर्दछ? यहीँ जहाँ हाम्रो हेल्थकेयर परिभाषित श्रृंखला आउँछ। हामी सर्तहरू तोड्दछौं ताकि तपाईं बुझ्नुहुनेछ understanding र समझदारीको साथ राम्रो बचत आउँछ।
यहाँ, हामी सिक्काइन्सको सामना गर्ने छौं। Co Co urance urance कवर स्वास्थ्य सेवा का लागतहरु को प्रतिशत हो तपाईले आफ्नो वार्षिक कटौतीयोग्य पुगे पछि पकेटबाट भुक्तान गर्नु पर्छ। यो आंकडा प्रत्येक चिकित्सा सेवाको कुल लागतमा लागू प्रतिशतले तोकिन्छ। तपाईको बीमा कम्पनीले उच्च प्रतिशत तिर्ने गर्छ, र तपाईले सानोलाई कभर गर्ने आशा गरिन्छ। उदाहरणको लागि, तपाईंको बीमाकर्ताले %०% भुक्तान गर्दछ र तपाईंले २०% तिर्नुहुनेछ। यस अवधारणा, अक्सर प्रतिशत सहभागिता को रूप मा संदर्भित बीमा कम्पनी को लागी जोखिम लाई कम गर्दछ पोस्ट-कटौती योग्य लागत को एक हिस्सा साझा गर्न को लागी व्यक्ति द्वारा।
Coins বীমা बनाम copyay
सिक्केन्स बुझ्ने समग्र लागत साझेदारी प्रणालीमा यसको भूमिका बुझ्नु आवश्यक पर्दछ। लागत साझेदारीको अन्य विधिहरू सामेल छन् कटौतीयोग्य र कागजातहरू , र सबै तीन सर्तहरू प्रायः - र गलत तरिकाले - आदानप्रदानको रूपमा प्रयोग हुन्छन्। प्रतिलिपिहरू एक फ्ल्याट शुल्क हो जुन एक व्यक्तिले डाक्टरको कार्यालय भ्रमणको समयमा वा प्रिस्क्रिप्शनको लागि तिर्नु पर्छ। एक सिक्सेन्स भुक्तानी, यसको विपरित, एक डाक्टर वा फार्मेसीको समग्र शुल्कको प्रतिशत हो, यसको अर्थ हो कि आउट-अफ-पकेट खर्च फरक हुन सक्छ।
कसरी mirena iud संग वजन कम गर्न को लागी
केही उपभोक्ताहरु यस धारणा अन्तर्गत संचालन गर्छन् कि तिनीहरु एक पटक आफ्नो वार्षिक पूरा गर्छन् जेब बाहिर घटाउन योग्य, तिनीहरूको स्वास्थ्य बीमा कम्पनी मा कदम र वर्षको बाँकी कुनै पनि अतिरिक्त लागत कवर गर्नेछ। दुर्भाग्यवस, प्रणाली सँधै सजिलो हुँदैन।
कटौती योग्य एक निश्चित रकम हो जुन बीमा कम्पनीले अधिकांश स्वास्थ्य सेवा लागतहरू कभर गर्न कदम चाल्नु अघि एक व्यक्तिले बाहिरको जेब तिर्नु पर्छ। कटौती योग्य पूरा भएपछि Co CoSistance प्रभावमा हुन्छ।
सिक्सेन्सरीको व्यापक अवधारणा एकदम सरल छ। तपाईंको कटौती योग्य पूरा भएपछि, तपाईंको बीमा कम्पनीले प्रत्येक भ्रमणको समग्र लागतको निश्चित प्रतिशतलाई कभर गर्नेछ, तपाईंलाई बाँकीको लागि जिम्मेवार छोड्नेछ। उदाहरणका लागि, मानौं हामीसँग। १,००० प्रक्रिया छ र तपाईंको बीमा समग्र लागतको% ०% कभर गर्दछ। तपाईंको सिक्केन्स १०% छ, जुन यस अवस्थामा १०० डलर हुन्छ।
के सिक्सेन्स राम्रो छ वा नराम्रो?
Co CoSistance आवश्यक छैन राम्रो वा नराम्रो, तर धेरै बीमा योजना को एक वास्तविकता। शुभ समाचार त्यहाँ तपाईको कुल सम्भावित आउट-पकेट खर्चको लागि सीमा हुन्छ। तपाईंको बीमा कम्पनीले अन्तत: कभर गरिएको सेवाको लागि पूरै बिल खडा गर्छ जब तपाईं एक पटक तपाईंको जेब कटौती योग्य र सिक्केन्स फीस समावेश गरीएको छ। खराब समाचार यो छ कि प्रायः व्यक्तिहरू कहिले पनि उनीहरूको अधिकतम अफ-अफ-पकेट खर्चहरू वर्षमा भेट्दैनन्।
जन्म नियन्त्रण कि तपाइँ वजन र मुँहासे कम गर्न मा मद्दत गर्दछ
एक भन्दा बढि जेबको के हो?
एक ब्यक्ति को एक अधिकतम एक व्यक्ति एक वर्ष मा बीमा द्वारा कवर मेडिकल सेवाहरु को लागी तिर्ने बढी पैसा हो। कटौती योग्य भेट गरेपछि, तपाईंले अझै सिक्सेन्स मार्फत प्रतिशत तिर्नु पर्छ। यद्यपि एक पटक आउट-अफ-पकेट अधिकतम भेटिएपछि कटौतीयोग्य, कपपेमेन्ट्स, र सिक्युरन्सका लागि निश्चित रकम तिर्ने बित्तिकै बीमा कम्पनीले तपाईंको स्वास्थ्य बीमा योजनाले ढाकेको सेवाहरूको १००% तिर्नेछ।
यसैले माथिको उही उदाहरणमा, हामी भन्न चाहन्छौं कि तपाईंको योजनामा ​​अधिकतम pocket 5,000 भन्दा बाहिरको जेब छ। एकचोटि तपाईंले त्यो रकम कटौतीयोग्य, प्रतिलिपिहरू, र सिक्युरन्समा खर्च गर्नुभयो भने, तपाईंको योजना रिसेट नभएसम्म बीमा १००% मा भुक्तान हुनेछ (सामान्यतया क्यालेन्डर वर्षको अन्तमा)।
सिक्सेन्स तपाईंको लागि के अर्थ हो?
तपाईंको सिक्सीरेन्स प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा नीतिमा निर्भर हुन्छ वा चिकित्सा योजना तपाईं छान्नुहोस्। तपाईको कटौतीयोग्य हिट गरेपछि तपाईको बीमाको सबैभन्दा सामान्य प्रतिशत तपाईले छोप्नु भनेको सामान्य रूपमा /०/२०, /10 ०/१०, वा /०/30० हो।
त्यसोभए तपाईंले भर्खरै आफ्नो कटौतीयोग्यलाई हिट गर्नुभयो - यसलाई कल गर्नुहोस् $ २,००० — जसको मतलब हो कि तपाईंले एक वर्षमा विभिन्न कभर मेडिकल खर्चहरूमा यति धेरै खर्च गर्नुभयो। अब, तपाईको सिक्युरन्समा लात छ। यदि तपाईको सिक्सेन्स्योर २०% छ भने तपाईले प्रत्येक मेडिकल बिलको २०% तिर्नुहुन्छ, र तपाईको बीमाले 80०% लाई समेट्छ।
उदाहरण को लागी, तपाई घाँटी दुखाइको लागी डाक्टरलाई भेट्नुहोस्, र बिल कुल $ १००। यदि तपाइँको सिक्युरन्स २०% छ भने, तपाइँलाई त्यस यात्राको लागि $ २० चार्ज गरिने छ र तपाइँको बीमाले $ pay० तिर्नेछ।
तर त्यहाँबाट चीजहरू अझ जटिल हुन सक्छन्। बीमा कम्पनीहरूले प्राय: उनीहरूको नेटवर्कभन्दा बाहिरका सेवाहरूको लागि उच्च सिक्युरन्स दरहरू सेट गर्दछ - त्यो हो, सेवाहरू जुन पेशेवर पेसेवरहरू द्वारा गरिन्छ जुन तपाईंको बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गर्दैन।
१०% को एक इन्टर-नेटवर्क सिक्युरन्स रेट प्राय: आउट-अफ-नेटवर्क डाक्टर वा प्रिस्क्रिप्शनको लागि %०% वा %०% मा जान्छ। केहि योजनाहरु को कुनै पनि नेटवर्क को कभरेज को प्रस्ताव छैन।
अझ के हुन्छ भने, यदि प्रदान गरिएको सेवाको लागि शुल्क एक ईन्-नेटवर्क प्रदाताले चार्ज गर्ने भन्दा बढी थियो भने, व्यक्ति प्राय जसो लागतमा फरक पार्नुपर्नेछ।
सही योजना कसरी छनौट गर्ने
ह्या hang्गओभर निको पार्न के गर्ने?
यदि तपाईले पाउनुभयो कि तपाईको मेडिकल लागत प्रत्येक बर्ष बढी छ भने तपाईले उच्च योजनाको साथ विचार गर्न सक्नुहुन्छ मासिक प्रीमियम , कि सम्भवतः कम कटौतीयोग्य र सिक्सेन्सरी हुनेछ, र तपाईंको बीमाले तपाईंको अधिक चाँडो चिकित्सा खर्च खर्च गर्नेछ।
यदि तपाईं डाक्टरलाई विरलै भेट्नुहुन्छ भने, तपाईं कम मासिक प्रीमियमको योजनाको बारेमा विचार गर्न सक्नुहुनेछ, जबकि यसमा उच्च कटौतीयोग्य र सिक्सेन्स हुन सक्छ। र सम्झनुहोस्, कटौतीयोग्य रीसेट जब तपाईंको योजना साल समाप्त हुन्छ।
सिक्सुरेन्स र कटौतीयोग्य रकमको विचार भनेको योजना छनौट गर्दा तपाईंले सोच्नुपर्ने धेरै कारकहरू हुन्। तपाईका डाक्टरहरूले योजनाको नेटवर्कमा भाग लिने या नसक्ने भन्ने कुरा पनि तपाईले विचार गर्नु पर्छ र तपाईलाई आवश्यक पर्ने विशिष्ट चिकित्सा सेवाहरु कभर गरिएको छ कि छैन भनेर पनि विचार गर्नुपर्छ।
तपाईंको बीमा योजनाको मतलब छैन, एकलकेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्सको साथ मद्दत गर्न सक्छ जुन बीमाको साथमा पनि अयोग्य हुन सक्छ। केवल तपाईंको औषधिको लागि खोजी गर्नुहोस् र उत्तम मूल्य फेला पार्नुहोस् join त्यहाँ सामेल हुन वा प्रयोग गर्नको लागि कुनै लुकेका शुल्कहरू छैनन्।
मेरो शरीर मा रातो मोल के हो
पिउने सिरका तपाइँको लागी के गर्दछ
कसरी एक खमीर संक्रमण स्वाभाविक रूप मा निको पार्ने
omeprazole र pantoprazole एउटै कुरा हो?
Vyvanse 60 mg कहिले सम्म रहन्छ?